Sida loo ahaadaa qof asluub ​​fiican oo ay leeyihiin dhaqan wanaagsan ee USA | USAHello | USAHello
Sida loo ahaadaa qof asluub ​​fiican oo ay leeyihiin dhaqan wanaagsan ee USA
Sidee ayaad ku ogaan waxa edeb dal cusub? dhaqamada kala duwan u dhaqmaan siyaabo kala duwan. Kuwani 10 Talooyin ku tusi doono asluubta wanaagsan ee USA.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha si ay u muujiyaan asluubta wanaagsan ee dalka Mareykanka. Talooyin waxay kaa caawin doonaan si ay u muujiyaan ixtiraam iyo ahaadaa qof asluub ​​fiican in Americans.
1. Waxaad dhahdaa “fadlan”
Dadka Maraykanka badidoodu yidhaahdaan “fadlan” marka ay doonayaan in ay wax. Tusaale ahaan, haddii aad ku amro cunto makhaayad, laga yaabaa inaad tiraahdo “Waxaan doonayaa maraq, fadlan”. Haddii aad weydiiso wax hana dhihina “Fadlan”, Americans malaynayo aad u edeb.
2. Waxaad dhahdaa “mahadsanid”
Americans odhan “Mahadsanid” badan. In qaar ka mid ah dhaqamada, dadku waxay yiraahdaan kaliya “mahadsanid” dhacdooyinka la taaban karo. In Maraykanka, waxaa caadi ah in la yidhaahdo “mahad” xitaa waji ka yar. Tusaale ahaan, haddii aad gacanta qof buug, waxay aad ugu mahad naqayaa laga yaabaa in. Isku day in aad xasuusato in la yidhaahdo “Mahadsanid,” gaar ahaan in qof kasta oo gacan ka ama isku dayaan in ay kaa caawin.
3. Waxaad dhahdaa “ka xumahay”
Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay “ka xumahay” badan dadka dhaqamada kale. Tusaale ahaan, haddii uu qof si qalad ah kuuskuus aad galay waddada, waxaa laga yaabaa in ay la raali “iga raali ahow” ama “xumahay.” Americans, haweenka gaar ahaan American, mararka qaarkood waxay isticmaalaan ereyga “ka xumahay” si uu u muujiyo murugo wax kugu dhacay, in kastoo ay lug kuma dhacdo. Tusaale ahaan, kuu sheegi kartaa qof in aad buka todobaadkii ama in saaxiib dhintay. Si aad u noqoto nooc oo edeb, iyana waxay u jawaabi laga yaabaa in, “Waan ka xumahay.”
4. Dabool afkaaga marka aad daacsii ama qufac aad
Dad badan oo Maraykan ka fiirsan waxa akhlaaq xumo in la sameeyo dhawaaq jirka ka hor dadka kale. Waxay isku day in aadan u gudbin gaaska, daacsii, ama ka dhigi dhawaaqyada kale ee jidhka ee dadweynaha ama dadka hortiisa ha iyagu ma og. Dadka qaar waxay ku marmarsiiyoodaan doonaa musqusha haddii ay u baahan yihiin in ay ku daacaan. Haddii aad Dhuusada ama daacsii, waa edeb in la yidhaahdo, “Raalli iga ahow.”
5. Waxaad dhahdaa “hello” marka aad la kulanto dad cusub
Marka aad la kulanto qof markii ugu horeysay, Americans caadi odhan, “Hello” ama, “hi, kulan wanaagsan.” Haddii aad leedahay qof kale aad la, waa edeb inay soo bandhigto qofka in sidoo. marka xigta ee aad la kulanto qofka, baad u odhan kartaa, “Nice in ay mar kale aad aragto,” ama, “Waxaan xasuustaa aad kulan bishii la soo dhaafay. Sidee tahay?”
6. Ha gacan haddii aadan ku raaxo
Dadka Maraykanka badidoodu gacantaada gariirin doonaa marka hadday idin la kulmaanna. Haddii aad dareento raaxo, aad had iyo jeer gacmahaaga wada gelin kara iyo madaxaaga ku soo foorariso weeraryahanka. Tani waa hab edeb leh si ay u muujiyaan aadan rabin inuu gacan qaado. Americans Qaar ka mid noqon doonaa mid aad u la yaabay, in aadan rabin inuu gacan qaado laakiin tani waa okay. Haddii aad tahay qof ka dhaqan halkaas oo rag iyo dumar ka baxsan qoyska ha midba midka kale uu taabto, sharax in edeb leh in qofka aad la kulmeysa. Uma baahnid in aad la sameeyo wax aad dareentid raaxo.
7. Istaag ugu yaraan cagta ah markii aad la hadasho qof cusub
Americans u muuqdaan in ay rabaan boos shakhsi ah ku wareegsan ka badan dadka dhaqamada kale. In Maraykanka, dadka ugu badan ee ku saabsan hal lug gooni istaagi doonaa mid ka mid kale. Xataa dadka in koox la meel u dhaxeeya taagan. Haddii aad istaagi aad ugu dhow qof marka aad ku hadlaya, waxay u malayn kartaa inaad isagoo dagaal ama iska dhigin mid la yaqaan. Waxay dib ugu qaadan kartaa tallaabo oo tusi yaab khafiif ah ama Diido,. Kale oo Maraykan ah oo aad u jir ahaan iyo qaban karo gacantaada halka ay ka hadlayaan, ama idinku hab in marka ugu horeysa aad aragto. Haddii ay taasi ka dhigaysa in aad raaxo, waa iska caadi in ay dib ugu xoojinno.
8. Eeg dadka indhaha marka aad la hadlay iyagii,
Waxaan kugu dhiiri si ay u ilaaliyaan qaybo muhiim ah oo dhaqanka. Si kastaba ha ahaatee, dadka ay indhaha raadinta marka aad la hadleyso waa hal shay oo aad samayn karto si ay ula qabsadaan nolosha America. Americans u muuqdaan in ay eegto dadka indhaha marka ay ka hadlayaan. Miyeyna arkaynin waxa laga yaabaa inaad indhahaaga ku jira, waayo, wada hadalka oo dhan - qayb kaliya waxaa ka mid ah. Haddii uu qof ka hadlayaa aad iyo aad u ma uu fiirin doono iyaga at indhaha, waxay u malayn kartaa inaad isku deyeyso inaad ku dhuumato wax ama qarsoodi ah.
9. Oo saf u taagan
Dadka Maraykanka badidoodu waxaa wax lagu baraa ka da 'yar in ay sugaan markoodii in line a. Sidaas, haddii aad tahay dukaanka ama isku dayaya in ay soo iibsadaan tikidhada filim, laga yaabaa inaad arki doonaa line a. Guud ahaan, dadka saf mid mid. Mararka qaarkood waxaad ku arki kartaa qof “kaalinta a” qof kale, laakiin inta badan Americans ka filan in ay sugaan markoodii. Inkasta oo aad ku arki kartaa qof jarjar khadka (idinka soo hor jeedda tago), badi dadkii ku sugi doonaa markoodii. Tani waxay sidoo kale waa run haddii aad tahay Dayuurad. Dadka guud ahaan sugi inuu ka tago diyaarad ilaa uu jeedin ay isku xiga ee.
10. albaabka hay furan yahay dadka kale
Dadka Maraykanka badidoodu qaban doonaa albaab furan adiga marka aad u gelaysaan / dhismaha ka soo baxaysa a. Haddii aad tahay nin ama naag, waa edeb albaabka qaban qofka aad ka dambeeya.
Read ku saabsan isgaarsiinta ee America
Read ku saabsan naxdinta dhaqameed
Fahamka dhaqanka iyo bulshada American
Baro sida si ay u guulaystaan ​​ee dalka Mareykanka